गर्लफ्रण्डसँग ब्वायफ्रेण्डको प्रश्न – Nepali News नेपाली समाचार
Homeसाहित्यचुटकिलागर्लफ्रण्डसँग ब्वायफ्रेण्डको प्रश्न
ब्वायफ्रेण्डः मभन्दा पहिला तिम्रा कति जना ब्वायफ्रेण्ड थिए….?
गर्लफ्रेण्ड चुपचाप बसिन् ।
ब्वायफ्रेडले चिच्याएर भन्यो…म तिम्रो यो मौनतालाई के ठानूँ…?
गर्लफ्रेण्डः हे भगवान । गन्दै त छु । निक कराउँछौ ।
एउटा हात मात्र भएको व्यक्ति आत्मग्लानी भएर आत्महत्या गर्न भनी पाँच तले भवनको छतबाट हामफालेर मर्न भनी जान्छ तर उसले त्यहाँबाट तल बाटोमा हेर्दा दुवै हात नभएको व्यक्ति नाचिरहेको देख्छ । ऊ दोधारमा पर्छ र मनमनै सोच्छ–उसका दुवै हात नभएर त कस्तो मज्जाले नाचिरहेको छ । मेरो त एउटा हात छ, झन म किन मर्ने ? उ छतबाट तल झर्छ र अर्को दुवै हात नभएको व्यक्तिलाई सोध्छ– एकहातेः दाइ, तपाई किन यति खुसी भएर नाचिरहनु भएको छ ? दुवै हात नभएको व्यक्तिः धेरै नकरा है मुला, अहिले एक लात्ती दिन्छु, आफूलाई जिउ चिलाएर कस्तो भइरहेको छ ?
चंखेकी चलाख स्वास्नी
चंखेकी स्वास्नी खुसी हुँदै परबाट पाँय सयको नोट हल्लाउँदै चंखेतिर मुसुमुसु हाँसद्यै आई । कहिल्यै आफ्नी स्वास्नीको हातमा पाँच सयको नोट नदेखेको चंखेलाई आज देखेर अचम्म लाग्यो । उसले शंकालु नजरले स्वास्नीलाई सोध्यो–हैन, ए बुडी, तैँले यो पान्सेको नोट काँट ल्याइस् ? ‘मैले कमार ल्याकी नि बुडा, स्वास्नीचैँले बडा’ फुर्तिका साथ भनी । ‘क्यारी कमाइस तैँले यो पैसो ?’ चंखेले मूख चच्चो पारेर भन्यो । ‘क्यारी हुनु नि, माइलोकाजीले लु कान्छी यो रुखाँ चडिस भने तँलाई म पान्से दिन्छु भने । अनि मैले यो जाबो रुखाँ को चड्न सक्दैन र कस्ताकस्ताँ त चडेँ भनेर चडेँ ।’ उसले गर्वका साथ भनी । ‘भनेसी तैँले यो पैसो रुखाँ चडेर कमाकी ?’ चंखेले कम्मरमा हात लाएर मुन्टो हल्लाउँदै भन्यो । ‘अनि के त, तिमी भा भे त्यो रुखाँ चड्न सक्थेनौ होला ? मूइले त आइमाई मुन्छे तर पनि त्यत्रो डर्लाउँदो रुखाँ चडेर पैसै कमाएँ ।’ स्वास्नीले धाक लगाई । ‘थुइअ लाटी, माइलोकाजीले तेरो कट्टु हेर्न खोजेथ्यो । लाटी देखाइस हैन ?’ चंखेले मुखभरिको थुक स्वास्नीको जिउमा बर्सायो । स्वास्नीले बठ्याई देखाउँदै भनी ‘अँ तपैँ पनि । मलाई था थ्यो तो काजीले मेरो कट्टु हेर्न खोजिरच भनेर….।’ ‘अनि क्यार्न चडिस् त रुखाँ फेरि ?’ चंखेले रन्किदै भन्यो । स्वास्नी पनि जंगिई–‘म तेती लाटी काँ छु र ? म नि कट्टु नलाई फरिया मत्रै लार रुखाँ चडेँ, काजी त उँभो फर्केर हेरेको हे-यै भए । मेरो कट्टु नै देखेनन् क्यारे, छक्क परेर ट्वाल्ल भएका थिए, मुख वाँ पारेर बस्या थे ।
नियमित यौन सम्पर्कले स्मरणशक्ति तेजिलो